Kufamba mafomu | Mapeji evaravara ehurukuro
Kufamba munguva dzekudyidzana kwenyika
Kufamba pasinei nevhidhiyo conferencing
Mamwe mapeji anokosha pamusoro pekufamba, mazororo uye geography
Kutanga kwezvakaitika kare zvemazuva ano buzzword "Mafambiro Ekufambisa" anogona kunyatsojeka shure shure kwekuguma kwe17. uye kutanga kwe18. Kudzokera shure kwezana remakore rechimakumi maviri, apo "Grand Tour" yezviitiko zvakakosha zvemachechi muEurope uye kuMiddle East yakave yakamanikidzwa nevevanhu vakuru vakapfuma vakuru veEurope uye bourgeoisie yepamusoro.
Kufamba kunowedzera kuwedzerwa kwako pachako
The anowanzonzi "chikuru rwavakaita" anonzi kufamba kunyanya akatungamirira kwemwedzi kuburikidza wakajeka nharaunda uye akakurumbira European uri maguta muFrance, Italy uye Spain, apo kazhinji anozivikanwa zvivako kubva kare, kuMiddle Ages uye Renaissance vakashanyirwa.
Nepo kudzidza zvikurukuru mutauro uye ruzivo nemagariro vakamira wehurumende mufambi ari nechekumberi, anokudzwa zvizvarwa vanofanira chigaro nevanhu zvinokosha nevamwe matare youmambo nokuda kufamba kwavo, kuchenesa tsika dzavo, kudzidza unyanzvi fence, kuti ndibatsireiwo eroottinen zvakaitika uye tarisa Marriage mikana.
Izvi zvikamu zvehutano hwakarongeka hwakanga huriwo mune 19 yose. uye kutanga 20. Century achiri zvikamu avo vokuparidzira pasi kuti aivawo mari zvinodiwa, zvakaitika zvanonoka pamwe veMubatanidzwa zvebhizimisi Tourism panopera Hondo Yenyika II muna 1950er makore zvishoma nezvishoma democratization dzidzo uye kudzidza nzendo.
Kubva panguva iyo, kuenda kune dzimwe nhengo dzenyika dzakave zvisingakwanisi kugadzirisa zviduku zvevanhu. Kunyange zvazvo vazhinji vevatashanisi vemazuva ano vanoenda kune dzimwe nzvimbo zvikurukuru nekuda kwezvikonzero zvekuvaraidza nekuzorora, unyanzvi hwekudzidzira hwekudzidzira kwevadzidzi uye semester kune dzimwe nyika kune vadzidzi zvakanyatsojeka mune tsika dze "Grand Tour".
Dambudziko rinonyanya kuonekwa munyika yose maonero evanhu vese vasina kutarisa nyika. Alexander von Humboldt
Zvichakadaro kwenguva nyanzvi kana nzvimbo inoramba kumwe zvazova kwazvo anozikamwa mubayiro mamaneja yokuona nayo basa basa. Musarudzo pamwe akakodzera ruzivo chiratidzo zvavanokwanisa ramangwana Vashandirwi nazvo yakakwirira mwero kubudirana pachena, mukana wokushandiswa uye ushingi einuzulassen ezvinhu matsva uye vasingazivikanwi.
Ndezvipi zvematongerwe enyika uye sei kusarudza ropafadzo uye zvakakosha?
Senzira kusingachamisiki chinotangira kwenyika dzepasi pose, panguva iyo kunyanya intercultural kugona uye ruzivo dzimwe mitauro, tsika nemagariro zvava kukosha kuti dzakawanda kubudirira makambani pose, zviitiko kufamba vava musimboti uye chinokosha chikamu kuti kunzwisisa vamwe nyika iri nani uye pakupedzisira vatengi, zvido zvavo, zvinotarisirwa uye zvinotarisirwa.
Zvinenge hapana kambani nhasi angarega kuhaya vashandi pasina wokumwe mutauro unyanzvi uye vanenge vashoma zvakaitika pakufamba. Mugore razvino nguva uye pamusoro digitally nezvatinovavarira maindasitiri pazviri zvakakwana zvakajairika uye zviwanikwa kuti vanhu vakawanda unterschiedlichster siyana vanoshanda pamwe chete uye zvibereko chinangwa dziri pedyo kakawanda nzendo kugamuchirwa akapora uye kushivirira nedzimwe nzira dzoupenyu uye tsika quasi atotendeukira ezvinhu chinodiwa.
Kufamba kune imwe nyika kunowedzera maitiro ako pachako
Mukuwedzera, kukosha dzebhizimisi pasinei rakafanotaura nevakawanda pakutsiva kubudikidza mavhidhiyo uye Internet Misangano mumakore achangopfuura kwawedzera pane yadzikira, zvichienderana chairo bhizimisi uye chaiyoiyo kupesana iri kutarisirwa vashandi kuhupenyu kuva musoro zvakanaka kunze uye unogona kuzvibata zvakakodzera.
Famba mukutanga kwe21. Izvo zana remakore rakabva rawedzera nguva uye nguva zvakare nguva yekuzorora inofadza kukosha kwehutano hwevanhu uye hunyanzvi. Vaya chete vanogona kufamba uye vanobata zvakanaka pamusangano wepasi rose vachakwanisa kuumba nzvimbo dzeutungamiri munguva yepakati uye kwenguva refu kumba.
Tinovimba kuti ruzivo urwu uye ruzivo kubva zvebhizimisi mumakore matatu kusvika mashanu emakore achatekeshera Parizvino unowanzonyengera munzvimbo dzakawanda, zvinosuwisa zvikuru simba chauvinistic uye rudzi birthing nyika zvematongerwo enyika munguva yemberi mamwe.
Germany - federal states uye dzose zvinyorwa
Federal Chancellor & Federal President we Federal Republic of Germany
Austria - federal states uye capitals
Switzerland - cantons uye misoro
Mazororo & zororo
Inofadza kufamba mazororo
Dzika musasa nemhuri
Mhuri dzinobatsira mhuri
Mhuri yezororo nemotokari
Paki yekunakidza nevana
US inoti uye capitals
USA senzvimbo yekuenda kunzvimbo
Kufamba muCanada - Niagara Falls